अंग्रेजी मा सहभागिता रूसी भाषामा सहभागिता भन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सहभागिता छैन वाक्यको मात्र स्वतन्त्र छन्, तिनीहरूले पनि ancillary भूमिका प्रदर्शन को धेरै अस्थायी प्रकारका भाग हो। रूसी भाषा दुई Singular छ : क्रिया प्रकारका gerund र participle। अंग्रेजी को वाक्य स्वतन्त्र सदस्य रूसी participles र gerunds रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ तिनीहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने जो, participles, दुई प्रकार प्रबन्धन।
सहभागिता 1 यो पनि वर्तमान participle भनिन्छ। यो क्रिया को लामो फारम को गठन मा भाग। अवधि मूल्य लागि विशेषता छ यो participle वा मार्गदर्शन प्रयोग। अंग्रेजी मा पहिलो सहभागिता -ing को क्रिया अन्त को आधार गर्न संलग्न द्वारा गठन गरिएको छ। उदाहरणका लागि:
पढ्न - पढ्न, पढेर - पढाइ, पढेर;
कट - कट, काटन - काटन, काटन;
निम्त्याउने छुटकारा, - - निम्त्याउने, निम्त्याउने छुटकारा।
सहभागिता 2. यो पनि participle भनिन्छ पछिल्लो काल को। यो मात्र होइन आफैलाई, तर पनि क्रिया को पूरा प्रकारका गठन लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले, पूरा को connotation छ। या त आधार बन्द क्रिया गर्न संलग्न द्वारा गठन -ed, वा यदि गलत क्रिया, टेबल अनियमित क्रिया लिइएका। उदाहरणका लागि:
पढ्न - पढ्न, रातो - (बारेमा) पढ्न;
कट - कट, कट - कटौती;
उद्धार - उद्धार गर्न, वितरण - बुझाइएको।
को अंग्रेजी भाषामा पहिलो सहभागिता: फाराम
त्यहाँ पहिलो सहभागिता चार प्रकारका छन्। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि सक्रिय आवाज मा पछिल्लो काल को प्रकारका अवस्थित छैन।
हाल सक्रिय आवाज - लेखन।
हाल, निष्क्रिय - लिखित भइरहेको।
सक्रिय आवाज सिद्ध फारम - लिखित होने।
को निष्क्रिय आवाज सिद्ध फारम - लिखित गरिएको होने।
यो sacrament परिभाषा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर तिनीहरूले अक्सर अधीनस्थ दफा अनुवाद गर्न धेरै सजिलो छन्। तलको उदाहरण मा, यो स्पष्ट देखिने हुनेछ।
अंग्रेजी मा दोस्रो participle: फाराम
Participle 2, वर्तमान participle विपरीत, केवल एक अस्थायी आकार छ। यो सामान्यतया निष्क्रिय आवाज वा आवेकहिन वाक्य मा participle सिद्ध वा त्रुटिपूर्ण प्रजाति अनुवाद गरिएको छ। उदाहरणका लागि:
त्यस गाउँमा निर्माण भएको घरहरू अनौठो थिए। - यो गाउँमा निर्मित हाउस, अनौठो थिए।
दिइएको गर्दा ब्रश रंग गर्न प्रयास गर्नुहोस्, दिइएको जब गीत गाउन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। - यो ब्रश दिइएको जब - कोर्नुहोस् ध्वनि गाउन pesnya- गर्दा।
प्रयोग participle उदाहरणहरू
तर आफ्नै घरमा सम्मान भइरहेको छैन । - तर यो आफ्नै घरमा सम्मान छैन। - यो निष्क्रिय आवाज मा वर्तमान काल मा participle2प्रयोग गरिन्छ।
Jenna आउनै लागेको यात्रा बारे उनको भने थियो , र त्यो जन संग एक्लै बाँकी भइरहेको protested थियो जब, आमा यो स्पष्ट भएको stakes थिए उनको ठ्याक्कै के गरे। - Jenna आगामी यात्रा बारे उनको भन्नुभयो, र त्यो टेड संग नै रहन आदेश विरुद्ध protested गर्दा, आमा स्पष्ट उनको यो निर्भर थाहा दिनुहोस्। - यहाँ पहिलो सहभागिता वर्तमान काल मा, सक्रिय आवाज मा (- आगामी यात्रा, समीप आ जाना - यात्रा आसन्न टास्नु) प्रयोग, र वर्तमान मा सहभागिता काल, तर निष्क्रिय आवाज मा (त्यागून् left- हुनुको)। अनुवाद paranasal बाँकी भइरहेको कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यहाँ th वाक्य।
प्रयास र यी shamans निन्दा गरिएको होने गरिब wretches मर्न बर्बाद थिए। - यो परीक्षण र दोषी shamans विषय, यी गरिब मृत्यु निन्दा गरेका थिए। - वर्तमान participle, सिद्ध फारम गरेर, निष्क्रिय आवाज मा।
फारम participles सिक्न, यो कुनै पनि लिन पर्याप्त छ कला को काम वा पत्रिका बाट एउटा लेख र केही उदाहरणहरू बाहिर बनाउन। सहभागिता सक्रिय पत्रकारिता र साहित्य मा प्रयोग गरिन्छ।
विदेश चाहनुहुन्छ? पहिलो, तपाईं अंग्रेजी कस गर्न आवश्यक!
कति को अंग्रेजी वर्णमाला मा पत्र र तिनीहरूलाई कसरी पढ्न
अंग्रेजी मा काल को अनुक्रम: सम्झना गाह्रो, तर सम्भव छ!
साहित्यिक analogies र अभिव्यक्ति को दैनिक अर्थ: "भोक मेरो चाची छ"
एकाटेरिनबर्ग, यूराल लेखकहरूले मुग्ध पार्ने संगीतको, फोटो, समीक्षा को संयुक्त संग्रहालय च्याम्बर थियेटर
केक "को निग्रो को चुम्बन": एक निर्धारण, विशेष गरी पकाउने, सजाय विकल्पहरू
एफटीपी बंदरगाहों कसरी कन्फिगर गर्न? को एफटीपी-पोर्ट के हो?